China Computer Desk YF-GD003 Mpanamboatra sy mpamatsy | Yifan
Birao an-trano biraon'ny solosaina ankehitriny misy fotsy fotsy manjavozavo, miaraka amina boatin-drakitra miisa 3, fitoeram-bokatra
Manana traikefa tsara miasa avy any an-trano, ary haingon-trano tsara ho an'ny efitranonao, na birao an-trano.
TOETOETRA Sariitera 4, vata fitendry 1
DIMENSION TABLE 43,3 x 19,68 x 29,52 santimetatra
Ny famitana ny tampon-tampon'ny fotsy mangirana dia singa tena ilaina amin'ny efitranon'ny tanora, birao an-trano, na aiza na aiza ilana sehatr'asa ilaina.
Azonao atao ihany koa ny mametraka an'io birao io ao amin'ny efitranonao, miaraka amina vatasarihana telo eo akaikin'ny fandriana ho lalimoana eo am-pandriana. Na ny zoron'ny efitrano fandraisam-bahininao, efitrano fianarana.
Ny habe mahazatra dia 120x60x76cm, azontsika atao ny manamboatra habe lehibe toy ny 140x60x76cm, na 160x60x76cm mifototra amin'ny fangatahan'ny mpividy.
Ity latabatra solosaina ity dia misy kabinetra mitaingina miisa 3, manana toerana ampy hitazomana ny taratasinao, ny rakitrao, ny antontan-taratasy na ny magazinao.
Miaraka ambony latabatra lehibe, habe L120xD60cm, azonao atao ny mitahiry zavatra ilaina maro mety ho tianao an-tanana. Ny teboka lehibe fivarotana dia ny fifandraisana misy eo amin'ny takelaka sy ny tongotra, miaraka amin'ny zoro manjelanjelatra sy boribory izay manintona ny maso tokoa.
Misy ihany koa ny talantalana fitendry misintona ambanin'ny latabatra ambony latabatra, izay fahatsapana tsara kokoa rehefa mampiasa solosaina ianao.
Ny fitaovana dia MDF avo lenta, (MID DENSITY FIBERBOARD), miloko fotsy manjelanjelatra, miaraka amina ravina mainty ho haingon-trano.
Ny fanaka birao maoderina dia tsy maintsy ananana amin'ny toerana rehetra na asa na fianarana. Izy io koa dia fomba mora sy mahomby hamoronana toerana miasa tanteraka. Ka atombohy amin'ity birao mahafinaritra ity ny asanao ao an-trano.
Famolavolana sy famaranana ankehitriny
MDF fitaovana ambony naoty ambony
Famaranana ambony kalitao
mihazakazaka mihazakazaka amin'ny mpantsaka rehetra hahazoana fidirana mora
Tabilao mafy orina manome fitoniana sy faharetana
Safidy fitahirizana marobe avy amin'ny birao mankany amin'ny vatasarihana
Fivoriambe madio sy madio mora foana
Previous: Birao informatika YF-GD002
Birao solosaina birao an-trano melamine fotsy misy 4 ...
Birao solosaina maoderina ankehitriny ho an'ny biraon'ny trano